Naya Bikalpa | » नेपाल र चिनको सम्बन्ध अत्यन्त नजिकको सम्बन्ध हुनुपर्छ भन्ने कुरामा हाम्रो स्पष्ट नीति छ नेपाल र चिनको सम्बन्ध अत्यन्त नजिकको सम्बन्ध हुनुपर्छ भन्ने कुरामा हाम्रो स्पष्ट नीति छ – Naya Bikalpa
नेपाल र चिनको सम्बन्ध अत्यन्त नजिकको सम्बन्ध हुनुपर्छ भन्ने कुरामा हाम्रो स्पष्ट नीति छ
प्रकाशित मिती: २०७६ आश्विन १३, ०७: ३२: ४२
नेपाली काँग्रेसले दोस्रो चरणको राष्ट्रिय जागरण अभियान, चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण तथा महँगी सम्बन्धी कुराहरुलाई लिएर नेपाली काँग्रेसका नेता नविन्द्रराज जोशीसँग नयाँ विकल्प साप्ताहिकका लागि विशेष संवाददाताले गरेको कुराकानीः
काँग्रेसको दोस्रो चरणको राष्ट्रिय जागरण अभियान सम्पन्न भइरहँदा सोचेंजस्तो उपलब्धी प्राप्त भएन भन्छन् नी हो ?
उपलब्धीहरु केही देखिएन भन्न मिल्दैन । हामीले जनताको बिचमा जाने मौका पायौं । विरोधसभाहरुको आयोजना भयो । पार्टीका साथीहरुका बीचमा छलफल भयो । पार्टीको यो–यो रणनीति हुनुपर्छ, पार्टीले यहाँनिर आफुमा भएको कमीकमजोरी सच्याउनुपर्छ, मुलतः अहिले अरु राजनीतिक दलहरुको क्रियाकलापको बारेमा साथीहरुले जिज्ञासा राख्नुभयो ।
त्यस विषयमा साथीहरुसँग छलफल भयो । त्यसपछि सरकारले अहिले गरेका गलत कार्य, सरकारका भ्रष्टाचारका विषयहरु, त्यसपछि सरकारका कुशासनका विषयहरु लगायत वर्तमान सरकार अधिनायकबादतर्फ लम्केको समेत कुराहरु आएका छन् । त्यसैगरी सरकारले विभिन्न विधेयकका विषयहरुमा पनि व्यापक छलफलमा भए । एक किसिमले काँग्रेस कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ र जनताको अपेक्षा के छ ? आम कार्यकर्ताले कसरी सोंचिरहेका छन् भन्ने कुरामा राम्रो उपलब्धीमूलक नै बहस एवं छलफल चल्यो ।
राष्ट्रिय जागरण अभियान चलाइरहँदा कार्यकर्ताहरुले नेतृत्वको बारेमा व्यापक छलफल गरे र असन्तुष्ट व्यक्त गरे, के यो असन्तुष्ट विचारहरुलाई केन्द्रले सम्बोधन गर्ला ?
नेपाली काँग्रेस पार्टीमा कार्यकर्ताले भनेका कुराको प्रभाव अब कति पर्छ ? निर्णयमा त्यसको प्रभाव कति पर्छ । आम कार्यकर्ताले चाहेको कुरालाई नेतृत्वले कति सम्बोधन गर्छ । त्यसमा नेपाली काँग्रेसको भविष्य निर्भर हुन्छ । कति उत्साह आउने ? किनभने नेपाली काँग्रेस पार्टीका आम कार्यकर्ताहरुले आम नागरिकको के चाहना छ, आमनागरिकले के सोंचिरहेका छन् ?
त्यसका बारे पनि विचारहरु व्यक्त गरेका छन् । पार्टी भित्रका विषयहरु पनि व्यक्त भएका छन् । अन्य राजनीतिक दलहरु अहिले सरकारमा भएका बेला भएगरेका कामका विषयमा पनि छलफल भएका छन् । अहिलेको सरकारका विषय मुलतः महँगी, भ्रष्टाचारका विषयहरुमा नेपाली काँग्रेसले कस्तो किसिमको कदम चाल्नुपर्छ ? आम कार्यकर्ता, आम नागरिक के चाही रहेका छन् भन्ने कुराको जानकारी त्यसको ज्ञान दिएर पठाएका छन् ।
काँग्रेसको पहिलो जागरणमा पनि यस्तै भावनाहरु व्यक्त भएका थिए, अहिले पनि निकै ज्ञान दिएर पठाएका छन्, तर काँग्रेसको नेतृत्व आफै कहिले सच्चिने हो त ?
नेपाली काँग्रेस पार्टी पनि सच्चिनु पर्छ र अरुलाई पनि सच्याउनुपर्छ । काँग्रेसका आफ्ना कमीकमजोरी छन् भने त्यसलाई पनि सच्याउनुप¥यो, रणनीति कार्य दिनुप¥यो । वर्तमान अवस्थामा जनता आत्तिसकेका छन्, यो सरकारबाट ।
यो सरकार विरुद्धमा जति सडक र सदनमा प्रभावकारी भूमिका हुनुपर्ने हो, त्यो भएको छैन । जनताले चाहेका विषयहरु यि–यि हुन् भनेर आएका छन् । त्यसलाई नेपाली काँग्रेसको केन्द्रीय समितिको नेतृत्वले पार्टीमा एकजुट बनाई पार्टीभित्र सबैलाई न्याय हुने अवसर दिने कुरामा कहिकतै कन्जुस्याई गर्नु हुँदैन । जसरी जनता अहिले आत्तिएका छन्, जनतालाई अहिले जनु किसिमको मार परेको छ, जस्तै कर, भ्याट, महँगीले ग्रस्त पारेको छ ।
संस्थागत रुपमा भ्रष्टाचार बढीरहेको छ । यसका विषयमा नेपाली काँग्रेस पार्टीले ठोस रुपमा अगाडि ल्याओस् भन्ने चाहना आम कार्यकर्ताको छ । यसलाई सम्बोधन ग¥यो भने मलाई लाग्छ यो जनजागरण अभियानले जे प्राप्त गर्न खोजेको थियो, त्यो हामीलाई प्राप्त भयो भन्ने लाग्छ ।
सिंङ्गो काँग्रेसले जनजागरण अभियान चलाइरहँदा गुटको प्रभाव परेका कारेण एउटा गुटले अर्को गुटलाई सम्बोधन नगरेको विषयलाई तपाई के भन्नुहुन्छ ?
पार्टीले सबैलाई अवसर दिने हो भने पार्टीभित्र गुट–उपगुट हुँदैन । हिजो निर्वाचनका बेलामा वा त्यसपछि नेपाली काँग्रेस पार्टीभित्र जुन किसिमको समस्या देखियो त्यसको समाधानमा नेपाली काँग्रेस पार्टीका कार्यकर्ताले जुन भावना व्यक्त गरेका छन् ।
म उदाहरण दिन चाहन्छु । एउटाले टिकट पाउँछ, टिकट पाउनका लागि चार जना इच्छुक छन् । एक जनाले टिकट पायो तीन जनालाई पार्टीले वास्ता गरेन कमसेकम बोलाएर म तिमीहरुलाई यस्तो गर्छु भन्ने कुराको भुमिका पार्टीभित्र देखिएन । मलाई लाग्छ, यसलाई कसरी व्यवस्थित गराएर लैजाने ? काँग्रेसको सिद्धान्त र आदर्श अहिले पनि जनताका लागि सबैभन्दा प्रिय छ भन्ने कुरा देखाएको छ ।
तर नेपाली काँग्रेसले आफुलाई कार्यनीति योजना बनाएर आफूलाई अगाडि बढाउनुपर्ने हो यसमा कमीकमजोरी भयो भन्ने जस्ता धारणा आएको जस्तो मलाई लाग्छ ?
कार्यकर्ताको भावना अनुसार नेताहरुले आफूलाई परिवर्तन सक्लान त, के लाग्छ यहाँलाई ?
नेताहरुले आफूलाई परिवर्तन गर्नैपर्छ । अहिले राष्ट्रमा जुन प्रकारको चुनौति आएको छ । राष्ट्र अप्ठ्यारो स्थितिमा परेको छ । लोकतन्त्रमाथि खतरा आएको छ । यसबेला हामी एकजुट भएर यि सबै कुराहरुलाई सम्बोधन गर्न सक्ने हुुनुपर्छ, नेतृत्वले यि सबै कुराको सम्बोधन गर्न सके काँग्रेसको भविष्य उज्वल छ ।
तपाईसँग नयाँ विकल्प साप्ताहिकका लागि कुरा गर्दा नजिकिएको हिन्दुहरुको महान् पर्व वडादशैमा मूल्य वृद्धि निकै बढ्दै गइरहँदा, काँग्रेस पार्टी प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियतले किन केही बोल्न सकिरहेको छैन ?
यो सरकारको क्रियाकलापबाट जनता त्रसित छन् । राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक सबै रुपमा जनताले यो दुईतिहाई सरकारसँग राखेको अपेक्षा भन्दा ठिक उल्टो भएको छ । जनता यो सरकारबाट केही कुरामा आशावादी छैनन् ।
जनताको जिवनस्तर झनझन खस्किदै गएको छ । यो सरकारले धेरै सामाजिक कुरामा प्रहार गर्दै आइरहेको छ । गुठी विधेयक ल्याएर धर्ममाथि प्रहार ग¥यो । प्रत्येक ठाउँमा जनताको विरुद्धमा यो सरकार देखिएको छ । यो कुरा जनताले व्यक्त गरेका छन् । त्यसका लागि लड्ने को त ? त्यसको लागि तयार हुने को त ? अब भोलीका लागि नेपाली काँग्रेस पार्टीले आफूलाई तयार पार्नुपर्छ ।
राष्ट्रको समस्या समाधान गर्नुपर्छ । नेपाली काँग्रेस राष्ट्रप्रति जिम्मेवार छ । प्रत्येक आन्दोलनको मियोको रुपमा नेतृत्व गरेको नेपाली काँग्रेस पार्टीले हो । लोकतन्त्रका लागि आफ्नो जिवन बलिदान गर्ने कयौं कार्यकर्ता छन् काँग्रेसमा । नेपाली काँग्रेस पार्टीले नै तत्काललिन पार्टी एमाले र माओवादीलाई सबै लोकतान्त्रिक पद्धतिमा लिएर आएको हो ।
लोकतान्त्रिक प्रतिबद्धता जनाएपछि सहकार्य गरेको पार्टी नेपाली काँग्रेस हो । आज लोकतन्त्र माथिनै, आफ्नो प्रतिबद्धता माथिनै संविधान निर्माण गर्दा नेकपाले जुन कुरा गरेको थियो त्यसको ठिक विपरित क्रियाकलाप गर्दै आएको छ । त्यसैले आम कार्यकर्तादेखि नेपाली जनतालाई सचेत गराउँदै काँग्रेस अगाडि बढ्नुपर्छ ।
मित्र राष्ट्र चीनका महामहिम राष्ट्रपति नेपाल भ्रमणको लागि आउँदै गर्दा काँग्रेसभित्र आपत्ति निस्किएको हो ?
हामीलाई आपत्ति पनि छैन, टाउको दुःखाई पनि छैन । हामी उहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौं । नेपाल र चिनको सम्बन्ध अत्यन्त नजिकको सम्बन्ध हुनुपर्छ भन्ने कुरामा हाम्रो स्पष्ट नीति छ । हामीले परराष्ट्र नीतिका कुराहरु गरेका छौं । नेपाली काँग्रेस नेतृत्वको सरकार हुँदाखेरीनै चिनसँगको सम्बन्धलाई सुदृढ बनाएका छौं ।
चिनसँगको सम्बन्धलाई हामीले कहिल्यै पनि आपत्ति जनाएका छैनौं । जसरी मदन भण्डारीले जनताको बहुदलीय जनवाद भनेर लोकतान्त्रिक रुपमा पार्टी अगाडि बढोस् भन्ने चाहना राख्नुभयो । नेपालका वामपन्थी अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने उहाँको धारणा थियो । त्यसपछि बहुदलीय काटेर जनताको जनवादमा उहाँ जानुभयो । अब कहाँ जान खोजेको ? लोकतन्त्रनै समाप्त पार्न खोजेको हो ? नेपालको लोकतन्त्रमाथि कतै पनि अप्ठ्यारो कसैले पा¥यो भने नेपाली काँग्रेसका प्रत्येक कार्यकर्ताहरुलाई मात्र होइन नेपालका आमजनताकोनै टाउको दुखाई हुन्छ ।
लोकतन्त्रका लागि धेरै लामो समय लडेका हामी हौं । हिजो हामीले तानाशाही व्यवस्थाका विरुद्धमा लडेका हौं । धेरै ठुलो जोखिम लिएर नेपाली जनताले लडेका छन् । राणा शासन पश्चायत शासनका विरुद्धमा किन लड्यौ । हामीलाई संगठन स्वतन्त्रता चाहिन्छ, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता चाहिन्छ । प्रेस स्वतन्त्रता चाहिन्छ भनेर लडेका हौं ।
दुई छिमेकी देशका बीच हाम्रो सम्बन्ध राम्रो हुनुपर्छ भन्ने कुरा सँधै हामीले अगाडि बढाएका छौ । राष्ट्र र राष्ट्रका विषयमा हाम्रो कतै कन्फ्युजन पनि छैन । लोकतन्त्र विपरित कुराहरु आयात हुनुनै हाम्रो आपत्तिको कुरा हो । लोकतन्त्रमाथि कतै अप्ठ्यारो प¥यो भने हाम्रो आपत्ति हुन्छ । हामी त्यसका विरुद्धमा अगाडि बढ्छौं भन्ने हाम्रो प्रतिबद्धता हो ।
अहिले चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी र नेकपाबीच राजनीतिक समझदारी भइसकेको भनेर काँग्रेस अत्तालियो र डरायो भन्छन् नि, तपाई के भन्नुहुन्छ ?
डराउने कुरानै छैन । हामीले सम्माननीय चिनका राष्ट्रपतिलाई सम्मान गर्छौ, स्वागत गर्छौ । नेपाल र चिनको सम्बन्ध अझ प्रगाढ होस् भन्ने जुन किसिमको चाहना हाम्रो छ । जुन दर्शन, जुन विचार उहाँहरुले लिने भनेर जुन किसिमको अहिलेको सत्तामा रहेको पार्टीले, अहिलेको सरकारले जुन किसिमको व्यवहार र कुराहरु प्रशिक्षक लिएर आएर यहाँ परिक्षण दिने त्यसले कतातिर लैजादै छ देशलाई भन्ने कुराको चिन्ता हो ?
लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट आएको सरकारले निर्वाचनबाट आएको सरकारले संविधानसभाबाट संविधान बनाउँदाखेरी संविधान निर्माण गर्ने प्रमुख पार्टीको नाताले अहिले जुन क्रियाकलाप भइरहेका छन्, यो क्रियाकलाप जनता विरोधी, लोकतन्त्र विरोधी हुन भन्ने मलाई लाग्छ । जनताको लोकतान्त्रिक अधिकार सुरक्षित गर्नु नेपाली काँग्रेस पार्टीको दायित्व हो । सबैलाई लोकतान्त्रिक प्रक्रिया लिएर आएको पार्टी, लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धतालाई विश्वास गरेर हामी अगाडि बढेको हो ।
जनताको अधिकार खोस्न पाइदैन ? लोकतान्त्रिक प्रणालीमा देशको राजनीतिक मुल आधार हुन्छ भन्ने कुरा हाम्रो प्रतिबद्धता हो । यो प्रणालीमाथि सरकारमा भएको पार्टीले हमला गरेको छ भन्ने मलाई लागेको छ । अन्त्यमा लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्धता रुपमा रहेको नयाँ विकल्प साप्ताहिक परिवारलाई विशेष धन्यवाद ।
२०७६ आश्विन १३, ०७: ३२: ४२